सम्भवतः फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुनसक्छ : प्रचण्ड - Rastrakokhabar
सम्भवतः फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुनसक्छ : प्रचण्ड
२२ माघ २०७७, बिहीबार १०:१५
काठमाडौं, २२ माघ । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्भवतः फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन हुने बताएका छन् ।
त्यसक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले हड्ताल आफूहरुको बाध्यता भएको बताएका छन । सरकारले बलमिच्याई गरेर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेकाले त्यसबारे जनतालाई जानकारी दिन सडकमा आउनु परेको उनले बताएका छन ।
संसद विघटन र संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको सबैले विरोध गरेको भन्दै प्रचण्डले अब अझ सशक्त आन्दोलन हुने बताएका छन । उनले अघि भने, ‘हाम्रो सबैसँग कुरा भइरहेको छ । सम्भवत फागुन पहिलो हप्ताबाट संयुक्त आन्दोलन हुन्छ र त्यसले सबै लोकतन्त्रविरोधी र निरंकुशता पक्षपातिलाई बढार्छ ।’
Previous Post	आजको राशिफल ( वि. सं. २०७७ माघ २२ गते, बिहीबार)
Next Post	शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा धरपकड गरेर सरकारले द्वन्द्व तिम्त्याउन खोजे : नारायणकाजी